Homogeneous vinyl pasi, inonziwo homogeneous pvc pasi, rudzi rutsva rwehuremu hwemuviri hwekushongedza muviri seimwe yemhando dzakakurumbira dzevinyl flooring, inoumbwa netaundi rezvinhu zvakafanana, rakafanana ruvara uye pateni mukati mekukora kwechigadzirwa, Chinhu chikuru cheiyo isina-yekuratidzira yakajeka yakajeka pasi ndiyo polyvinyl chloride zvinhu, ichiwedzera calcium carbonate, plasticizer, stabilizer, excipients.
Homogeneous vinyl pasi, inonziwo homogeneous pvc pasi, iri mhando nyowani wehuremu hwemuviri kushongedza zvinhu seimwe yemhando dzakakurumbira dzevinyl flooring, inoumbwa netaundi rezvinhu zvakafanana, rakafanana ruvara uye pateni mukati mekukora kwechigadzirwa, Chinhu chikuru cheiyo isina-yekuratidzira yakajeka yakajeka pasi iri polyvinyl chloride zvinhu, ichiwedzera calcium carbonate, plasticizer, stabilizer, excipients.
Nokushandisa JW welding rods kupisa musoni weld majoini pakati pePV sheet uye mataira, inoenderera, isinga pindike isina mvura pasi pasi inogona kuwanikwa.
Hwemweya mhando: TVOC kuburitswa yakaderera pane yeEuropean standard, uye yakakwana mweya mhando inosimbiswa.
Iko huru yezvinhu zvechigadzirwa inyowani PVC resin zvinhu, zvakasikwa calcium carbonate, isiri-phthalic plasticizer, uye pamusoro pechitsiko chinhu chiri pachena chekupfeka-chisingapfuure cheiyo yakachena PVC zvinhu (kuwedzera hupenyu hwebasa reiyo nhanho). Matanho ematanho ane yakanakisa anti-slip, mhedzisiro-inokanganisa mhedzisiro, uye ane akasiyana mavara eanosarudza kubva, ayo anogona kusangana nehukuru saizi yezvikwiriso zvakasiyana muzvivakwa zvazvino uye nekurongeka kwese kwemavara.
Iyo yakasvibira, yakasviba-mwenje, yakasviba-yakatetepa, uye kumanikidza-kusagadzikana Kupfeka-kurwisa, kusagadzikana-kusagadzikana, kurwisa-kutsvedza, kudzora moto, isina mvura, isina hunyoro, inonzwika kurira uye ruzha-humbowo, isina musono kutenderera, kupora kuri nyore, nekukurumidza kuvaka, kwakasiyana siyana, isina simba asidi uye alkal i ngura kuramba, kupisa conduction uye kudziya, kusvibisa kuramba, kugadzirisa Zviri nyore, zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvinowedzerwazve, nezvimwe.